North Poing Shopping Mall
ပူပေါင်းလေးတွေက မျက်နှာကျက်ပေါ်မှာ double tape နဲ့ ကပ်ပီး ဖယောင်းပါတဲ့ဖဲကြိုးလေးတွေကို ပေတံနဲ့ ဆွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာ ဖဲကြိုး ကွေးကွေးလေးတွေ ရသွားတာမို့ ခရစ်စမတ်အရောင်ဖြစ်တဲ့ အနီရောင်နဲ့ အစိမ်းရောင်ကို မျက်နှာကျက်မှာ ဆင်ချင်ပေမယ့် အစိမ်းရောင် ပူပေါင်းတွေ မရှိဘူး ဆိုင်မှာ။ အနီရောင်လည်း အဆင်ပြေနေတာမို့ မာမီတို့ ရဲ့ 2009 x'mas အလှဆင်ခြင်း အမှတ်တရအချိန်လေးပါ ...
၂၀၀၉ ခုနှစ် ရွှေပုစွန် ခရစ်စမတ် အလှဆင် ဒီဇိုင်းများနှင့် မိသားစု အမှတ်တရ
သမီးလေး နှင့် သားလေး အကြိုက် ရွှေပုစွန်မှ မုန့်များ
စနေနေ့ နေ့လည် ပီဇာဆိုင်မှာ
သားသား ကြိုက်သော ပီဇာ ... extra cheese ထပ်ထည့်ခိုင်းရတယ်။ အဲဒါမှ ပိုစားကောင်းလို့ သားသားနဲ့ သမီးက ကြိုက်မှ ကြိုက်။
4:17 PM Memories No comments
04.01.2010 - တီဗီမှာ သွယ်သွယ် အင်တာဗျူးလာလို့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံလှမ်းရိုက်လိုက်ထားတဲ့ အချိန်တုန်းက ..
Game City မှာ သွားကစားခဲ့တဲ့ အချိန်လေး
4:19 PM Game Center - Game City No comments
တနင်္ဂနွေနေ့က အိမ်ကနေ နေ့လည် 12 နာရီကျော်မှာ စထွက်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်ရုံနားမှာ ရှိတဲ့ Game City ကို ၁၂း၃၀ နာရီနီးပါးလောက်မှာ ရောက်တယ်။ ရောက်ရောက်ချင်း ကလေးတွေ ကစားဖို့ လက်မှတ်လေးတွေ ၀ယ်တယ်။ မြင်းရဟတ်စီးတာနဲ့ မီးပုံပျံစီးတာပဲ လက်မှတ်တစ်စောင်ကို ၂၀၀ ကျပ်။ ကျန်တဲ့ ရိုလာကိုစတာ စီးတာတွေကတော့ ၃၀၀ ကျပ်ပါ။ ဒီနေ့က ပိတ်ရက်ဖြစ်တာမို့ လူလည်း တော်တော်များပါတယ်။ ပျော်ဖို့လည်း ကောင်းပါတယ်။
သမီး Angel မြင်းရဟတ်စီးနေတာပါ။ တစ်ခါစီး ကလေးတစ်ယောက်ကို လက်မှတ်ခ - ၂၀၀ ကျပ်။
သားသားကတော့ မြင်းပေါ်မှာ ထိုင်စီးပီး mum က သားသားကို ကိုင်ထားပါတယ်။ လူကြီးက ကလေးကို ဘေးကနေ ကိုင်ထိန်းပေးပီး စီးလို့ ရတယ်လေ။ လူကြီး အလကားပေါ့။
သမီးကတော့ ကစားကွင်းထဲက ဂိမ်းတွေ အားလုံးနီးပါး စီးတယ်။
ဒီ မီးပုံးပျံပူးပေါင်းက ခြေနင်းပီး စီးရတာ။ ခြေနင်းမှပဲ လည်နေတဲ့အချိန်မှာ မီးပုံးပျံပူပေါင်းက အမြင့်ကို တက်တာပါ။ မနင်းပဲ စီးလို့ ရှိရင် အမြင့်ပေါ်ကို မတက်ဘူး။ အဲဒါက လက်မှတ်တစ်စောင်ကို ၂၀၀ ကျပ်။ ဒီမှာတော့ သားသားအတွက် လက်မှတ်ဝယ်စရာမလိုဘူး။
ပင်လယ်ဓါးပြ လှေစီးဖို့ လေ။ မမ ပဲ စီးတာ။ သားသားက ငယ်သေးလို့ မစီးဘူး။
ပင်လယ်ဓားပြ လှေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မြင့်ပီး ပုခက်လွှဲသလိုမျိုးမို့ အူယားဖို့ ကောင်းတယ်။ သမီးကတော့ မကြောက်ဘူး။ စီးတာပဲ။
ရိုလာကိုစတာ အသေးလေး စီးဖို့ မမ စောင့်နေတာ။
ဒီ ရိုလာကိုစတာ အသေးလေးက ဟိုဘက်ယိမ်းလိုက် ဒီဘက်ယိမ်းလိုက်နဲ့ရထားသွားတာပါ။ မြန်လည်း မြန်ပါ့။ မမ ကတော့ သဘောကျပေါ့။
ဒီ ချားရဟတ်က လည်ပီး တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်သွားတာ။ သမီးက ခေါင်းမူးမှာစိုးလို့ မစီးဖြစ်ဘူး။
ဒီ ဒုံးကျည်ကျပြန်တော့လည်း တစ်ယောက်ချင်းစီ ထိုင်စီးရတာမို့ သမီးက တစ်ယောက်တည်း မစီးချင်ဘူး ဆိုလို့ မစီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂိမ်းတွေ။
ခဏနားပီး ကစားကွင်းထဲမှာ ရှိတဲ့ J Cup - Jelly Milk Shape ၀ယ်သောက်ကျပါတယ်။ တစ်ခွက်ကို ဒီမှာတော့ ၄၀၀ ကျပ်ပါ။ အိမ်နားမှာတော့ ၃၀၀ ကျပ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးဆို သောက်လို့ ကောင်းတယ်။ ဆော့ထားတော့ ဗိုက်ဆာပီလေ။ မောလည်းမောပီ။
Pop corn က တော်တော်ရောင်းရတယ်။ စားလို့လည်း ကောင်းတယ်။ တစ်ဗူးကို 500 ကျပ်။ ကစားကွင်းတိုင်းမှာ အဲလိုဆိုင်လေးမျိုးတွေ ရှိတယ်။
mum တို့ သားအမိတွေက ဒီအတိုင်းပဲ အိမ်ကနေ လာခဲ့ကြတာ ဆိုတော့ အောက်ခင်းထိုင်ဖို့ ပလပ်စတစ်အခင်း မပါဘူးလေ။ ဒါကြောင့် သစ်မြစ်ဆုံလေးပေါ်မှာပဲ ထိုင်စားနေကြတာ။ အမှတ်တရပေါ့။
စားပီးသွားတော့ နောက်ထပ် ချားတစ်မျိုး ထပ်စီးနေတာ။ သူလည်း လက်မှတ်ခ ၃၀၀ ကျပ် ပဲ။ သူက အ၀ိုင်းပုံစံ လည်ပီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မြင့်တက်သွားတဲ့အခါမှာ ဘေးကိုတောင် နည်းနည်း စောင်းလိုက်သေးတယ်။ သမီးကတော့ မကြောက်ဘူး။
ရိုလာကိုစတာ စီးဖို့ လက်မှတ်ဝယ်နေတာ။
မိုးပျံရထားစီးမယ့် လူတွေပါ။ တော်တော်များပါတယ်။ ၃ခေါက်လောက် မိုးပျံရထား မောင်းတာကို စောင့်ပီးမှ စီးရတာပါ။ ဒီမှာ လာကစားကျတဲ့ လူတော်တော်များများ စီးဖြစ်ကျတာလည်း ပါမှာပါ။ တချို့ကစားတာတွေ ကစားဖြစ်ချင်မှ ကစားဖြစ်ပေမယ့်လို့ မိုးပျံရထားကျတော့ လူတိုင်းစီးတာကို တွေ့တယ်။
မိသားစုလိုက် ထမင်းချိုင့်တွေနဲ့ လာကြတာပါ။ ရန်ကုန်မြို့က အပန်းဖြေတဲ့ နေရာ တော်တော်များများကို ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့လည်မှာ ရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်ရုံ၊ ဂိမ်းစီးတီး၊ ကရ၀ိတ်ကတော့ ဒီလို ပိတ်ရက်မျိုးဆို လူ များတယ်။ ဒီလ 16 ရက်နေ့က ကရင်နှစ်သစ်ကူးလားပဲ။ ရက်ကို သေချာတော့ မသိဘူး။ အဲလိုနေ့မျိုးဆို တိုင်းရင်းသားကျေးရွာက ကရင်ရိုးရာအိမ်မှာ တော်တော်စည်တယ်လို့ ပြောတယ်။
ဒီ ဟာစီးတာက စက်ဝိုင်းအလုံးကြီးက ဘောလုံးလိုမျိုး လှိမ့်သွားတာ။ လူက အပေါ်ရောက်လိုက် အောက်ရောက်လိုက်နဲ့ပါ။ ကားဘီးလှိမ့်သွားသလိုမျိုးပဲ။ ခဏလေးပဲ ဆိုတော့လည်း စီးတဲ့လူတိုင်းက မမူးဘူးတဲ့။ အိပ်ကပ်တွေထဲက ပိုက်ဆံတို့ ဘာတို့ ထွက်ကျတတ်တာမို့ စီးတဲ့ အချိန် ဘာမှ မယူသွားတာ အကောင်းဆုံးပါ။
ဒီချားရဟတ်က လူတော့ သိပ်မများဘူး။ သမီးက ဒီ ချားရဟတ်ကိုငယ်ငယ်လေးကတည်းကစီးဖူးနေတာ။ ဒီကစားကွင်းရောက်တိုင်း စီးဖြစ်နေတဲ့ ချားရဟတ်ပါ။ ဂိမ်းစီးတီးမှာ ကစားပီးသွားပီဆိုတော့လည်း တိရစ္ဆာန်ရုံ သွားကြတာပေါ့နော်။
4:14 PM Angel No comments
Angel's Classroom X'mas Cake
4:14 PM Angel, School No comments
Shopping Mall က Christmas Tree နဲ့ အမှတ်တရ
ရဲတိုက်ကြီးအ၀င်ဝ မုဒ်ဦးမှာ ဈေးဝယ်ပီးပြန်လာတဲ့ Princess Angel
Angel လက်ဆောင်ပေးတဲ့ ခရစ်စမတ်ကိတ်မုန့်လေး
P II E, ILBC မှ သူငယ်ချင်းများနှင့် အမှတ်တရ
Angel ခရစ်စမတ်ကိတ်ကို ခွဲပေးနေပုံ
ဇာနည်၊ စိုင်းစည်သူထက် နှင့် သူငယ်ချင်းများ အတန်းထဲမှာ
Classroom's Christmas Decoration
အတန်းပိုင်ဆရာမ တီချယ်ငယ်ငယ် နှင့် အမှတ်တရ
လက်ထောက်ဆရာမ တီချယ်ရူပါနှင့် အမှတ်တရ
Please don't remove blogger's copyright marks/watermarks from the images.
( Family Personal Photos ) မိသားစု ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ - ဓာတ်ပုံများ နှင့် ဘလော့ပိုစ့်များကို မိတ္ထူကူးယူခြင်း၊ ( ကော်ပီကူးခြင်း )
လုံးဝ မပြုလုပ်ပါနှင့် ....
မိသားစု အမှတ်တရ အချိန်လေးများကို အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ပြီး ရေးသားထားသော မိသားစု အမှတ်တရ မှတ်တမ်း ..
Lucky Seven လက်ဘက်ရည် ကော်ပြန့်စိမ်း ကြက်သားပလာတာ အားလူးပူတီ ပဲပလာတာ
Dec 18 - ILBC Concert
ILBC Annual School Concert 2009 Primary I to IV Managing Director ဦးတင်မောင်ဝင်းမှ အခမ်းအနားဖွင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ် သမီးလေး Angel ...
Dolphin အက Video အခုနောက်ပိုင်း နာမည်ကြီးလာတဲ့ ကလေး နှစ်ယောက်။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ Ever ဂေါ်လီ DVD မှာ ခင်ကြီးကျယ် သီချင်းထဲမှာ အဲဒီ...
I wanna to eat you
Original Video - More videos at TinyPic Video : http://tinypic.com/player.php?v=5o81o9&s=3 Video : http://tinypic.com/usermedia.php?uo...
ရန်ကုန်မြို့၊ ၉ မိုင်မှာ ရှိတဲ့ North Point Shopping Mall မှာ ဒီနေ့ 5.12.09 က Family Week ပွဲ လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီပွဲရဲ့ ဖွင့်ပွဲကို ကိုဆန်းထွန်...
အသံတု - ရဲမြင့်လေး
အသံတု - ရဲမြင့်လေး ရဲ့ ယပ်တောင် မျက်လှည့် ဗီဒီယို (ပုံများကို ကလစ်နှိပ်ကြည့်သွားပါ။) From Fun Magic ယပ်တောင်မျက်လှည့် - ၂ From Fun Magic2ေ...
အပြင်သွားမလို့။ မောင်နှမ နှစ်ယောက် ထမင်းစားနေကြတုန်းက။ သုံးဘီးစက်ဘီးစီးနေသော သားသား။
စွန်တန် စွန်ခေါင်းသီး ငရုတ်သီးစိမ်းထောင်း ၀က်နံရိုး စွန်တန်ဟင်းရည် (ချဉ်ချဉ် စပ်စပ်လေး) ဆောင်းရာသီဥတုနဲ့ စွန်တန်ဟင်းရည်က အလိုက်ဖက်ဆုံးပါပဲ။ ...
Ancestor Altar - Praise The Ancestors! Praise to my Ancestors! My Father My mother I give praise to my ancestors. I give praise to my guardian angels. I give praise to the ...
တုံ့ပြန်မှု - သူလိုချင်တဲ့ ပုံစံ ရဖို့ ငါးစာချကျွေးတာနော်။
Spring Season, 2013 -
Buns & Rose - Buns & Rose Ingredients : All purpose flour –21/3 cups Yeast – 7g ( 1/4 oz ) Salt – 1/8 tsp butter – 1 Oz Sugar – 1/8 cup = 1 oz Milk – 275 ml ( 1 cup ...
ငယ်ငယ်တုန်းက .. - 04.01.2010 - တီဗီမှာ သွယ်သွယ် အင်တာဗျူးလာလို့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံလှမ်းရိုက်လိုက်ထားတဲ့ အချိန်တုန်းက ..
03 Months - roll over (1)
05 Weeks - Baby Smile (1)
07 weeks - Baby talk (1)
08 Months - Baby Crawl under bike (1)
09 Months - Baby Walk (1)
11 Months - Baby Draw (1)
12 Months - Baby Blow (1)
12 Months - Baby Slide (2)
13 Months - Baby Ride (1)
14 Months - Baby Climb his bed (1)
14 Months - Baby Climb ladder (1)
15 Months - Baby Speak phone (1)
17 Months - Play fishing (1)
20 Months - Play ironing (1)
2008 X'mas (1)
6 Years olds (2)
7 Years olds (2)
Blog Start Date (1)
Church - Immanuel Baptist Church (1)
Church - St. Mary Roman Catholic Church (1)
Create Story (3)
Dream Picnic (1)
Game Center - Aladin ( Kalaweik ) (2)
Game Center - Aladin (Shwe Gon dine) (2)
Game Center - Alardin (1)
Game Center - Alardin (Bo Ag Kyaw) (1)
Game Center - Capital (1)
Game Center - Game City (3)
Garden - Kalaweik (3)
Henry's Second Diary (1)
Henry"s First Diary (1)
ILBC - Book Fair (1)
ILBC - Concert (1)
ILBC - Fun Fair (4)
ILBC - Trip of Hlawga (2)
Immuzization Schedule (1)
Indo Plant (1)
Karaweik Garden (1)
Market - Bogyoke (1)
Monthly - One Month (1)
Movie - Bewitch (2)
Movie - Min Maw Kun (1)
Music - Han Tun (1)
Music - Htoo Eain Tin (1)
Music - Lay Phyu (1)
Music - Min Maw Kun (1)
Music - Sai Sai Khan Hlaing (2)
Music - Shin Phone (1)
Music - Wine Wine (1)
My sister's create story book (1)
Myanmar Zoo (4)
Pet - Hamster (1)
Pet - Puppy (1)
Play in Home (4)
Play in the Home (2)
Pun Hlaing Int'l Hospital (1)
Shopping Mall - Blazon (1)
Shopping Mall - Capital (2)
Shopping Mall - Capital Hyper (1)
Shopping Mall - East Point (6)
Shopping Mall - North Point (3)
Shopping Mall - Super One (1)
Shopping Mall - United Living Mall (6)
Shopping Mall - Wai Zayanta (1)
Shopping Mall - Zawana (1)
Shwe Pu Zun (2)
Shwe Pu Zun Garden (1)
Singapore - Playground (1)
Under2Years (10)
Web Site Link (1)
X'mas 2009 (3)
Yangon - Karaweik (2)
Yangon - National Village (1)
Yangon - Shwe Pu Zun (4)
Copyright © Thet Nandar Family | Powered by Blogger